दूधको मूल्य वृद्धि हुँदा अरू के–के को मूल्य बढ्छ ? « Bagmati Page
दूधको मूल्य वृद्धि हुँदा अरू के–के को मूल्य बढ्छ ?
सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट दूधको समर्थन मूल्य बढाएको छ । यसअघि, प्रतिलिटर मूल्य ४९.५२ रुपैयाँ कायम दूधको मूल्य ६.५२ रुपैयाँ अर्थात् १३.१७ प्रतिशतले बढेर ५६.०४ रुपैयाँ पुगेको छ । यद्यपि, किसानले पाउने मूल्य तोकिए पनि अहिलेसम्म उपभोक्ताले किन्ने मूल्य तोकिएको छैन । यसअघि प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ कायम दूधको उपभोक्ताले किन्ने मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँले बढाएर ८६ रुपैयाँ पुर्‍याउने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा किसानहरूले दुई महिना अघि दूधको उत्पादन लागत बढ्दा मूल्य बढाउन पर्ने माग राखेका थिए । दूध उत्पादक किसानले मूल्य बढाउनुपर्ने माग राखेपछि कृषि मन्त्री महिन्द्राराय यादवले ९ सदस्य अध्ययन समिति बनाए । राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डका उपकार्यकारी निर्देशक बाबुकाजी पन्तको नेतृत्वमा पशुसेवा विभाग, डेरी उद्योग संघ, नेपाल डेरी संघ, दुग्ध विकास संस्थान, उपभोक्ता मञ्च, कृषि मन्त्रालय र किसानसहितको समिति बनेको थियो ।
उक्त समितिले करिब एक महिना लगाएर सात वटै प्रदेशका २७ जिल्लामा स्थलगत अध्ययन गरेर दूधको उत्पादन लागतसहितको प्रतिवेदन तयार गर्‍यो । उक्त प्रतिवेदनमा दूधको उत्पादन लागत प्रतिलिटर ५७.१४ रुपैयाँ देखाएको थियो । तर, सरकारले मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट प्रतिलिटर ५६.०४ रुपैयाँ तोकेको हो ।
कच्चा दूधको मूल्य बढेपछि दूधबाट बन्ने सबैजसो दुग्धजन्य पदार्थको मूल्य समेत बढ्ने नेपाल डेरी संघले जानकारी दिएको छ । कच्चा दूधको मूल्य बढ्नासाथ प्रशोधित दूधको मूल्य प्रतिलिटर १० रुपैयाँ बढ्ने संघका अध्यक्ष राधाकृष्ण सापकोटाले जानकारी दिए । उनले किसानलाई तिनुपर्ने कच्चा दूधको मूल्य प्रतिलिटर ५६.०४ रुपैयाँ हुँदा त्यसमा थप ३० रुपैयाँ हाराहारी सङ्कलन तथा प्रशोधन लागत जोडिँदा मूल्य प्रतिलिटर ८६ रुपैयाँ हुन आउँछ । उनका अनुसार यसअघि प्रतिलिटर ७६ रुपैयाँ पर्ने दूध १० रुपैयाँ बढेर ८६ रुपैयाँ पुग्ने भएको हो ।